Plaxo Desktop Notifier - Mhinduro kubva kunetiweki yako | Martech Zone
Wednesday, April 23, 2008 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Plaxo rave chishandiso chinoshamisa chinobatsira che nenguva yakati uye zvinongoramba zvichiita nani. Mavhiki mashoma apfuura, ndakarova foni yangu mumusuwo wemota. Yakanga iri hit chaiyo, ichiparadzanisa foni muzvidimbu zviviri zvepanyama. Ndakagamuchira foni nyowani (gara wawana inishuwarenzi!) Zuva raitevera asi ndakanga ndarasa bhuku rangu rekero.
Ndakaita kutsvaga nekukurumidza maApplication aVerizon ndikaona kuti vaive naPlaxo semumwe wavo. Ndakaitakura uye ikozvino ndave kukwanisa kuwiriranisa foni yangu naPlaxo pane iwo maficha andasarudza. Zvakandiponesa mwedzi yekupindura mafoni ndisingazive kuti ndiani aive kune rimwe divi.
Zvino kunouya Plaxo Desktop Notifier
Kana vanhu vandakabatana ne twitter, tumira kune yavo blog, kana kuita dzimwe shanduko, ini ndinogashira desktop ziviso. Sezvo ini auto-tevera pa Twitter, Twhirl inoramba yakabatikana uye ini ndinonyatsosuwa mamwe maTweets kubva kuvanhu vari network yangu.
Kunyangwe ini ndine tani yekubatana paLinkedIn, ini ndinozviona izvo Plaxo yakanyanya kukosha kwandiri nekuti inochengeta ese mabhuku angu ekero (uye foni) zvakabatana. Ini handina basa nekubhadhara iyo sevhisi, futi. Icho chidimbu chendangariro ndichiziva kuti chero yangu makomputa kana foni yangu inogona kurasika uye ini ndichine bhuku rangu rekero chidimbu chepfungwa chakakodzera kubhadhara!
Tags: kudana kuzviitoinodaidzira chiitoclinkedchinokucollabspot mabhodhigrapheffectLewis howes
Zvemagariro Midhiya ndezve Kuuraya